တရုတ်အရည်အသွေးမြင့်ဘက်ထရီ Holder အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
Battery Holder အစိတ်အပိုင်းများသည်သင်၏ဘက်ထရီများကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူစေရန် pin နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဝါယာ၊ အဖုံးနှင့် WB 200-2P connector တို့ပါသောဤ 2AAA ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည် 3V ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သောပစ္စည်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
Battery Holder အစိတ်အပိုင်းများ၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ၁
ဤဘက်ထရီ Holder အစိတ်အပိုင်းများသည် AAA သာမန်ဓာတ်ခဲနှစ်လုံးသို့မဟုတ်အားပြန်သွင်းနိုင်သောဘက်ထရီနှစ်လုံးကိုထိန်းထားနိုင်သည်။ သာမန်ဘက်ထရီများသည် 3.0V ဗို့အားကိုထုတ်နိုင်ပြီးပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သောဘက်ထရီများသည် MP3 player, MP4 player, remote control, portable flashlight, wireless mouse စသည်ဖြင့် KeV အမှတ်တံဆိပ် Battery Holder အစိတ်အပိုင်းများကိုသုံးနိုင်သည် အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများ၊ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုသုံးပစ္စည်းများနှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြီး ၁၀၀% ကောင်းသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်။
ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၏အစိတ်အပိုင်းများ၏ ၂. Product Parameter (Specification)
ထုတ်ကုန်အမည် ဝါယာကြိုး၊ အဖုံးနှင့် WB 200-2P connector ပါ ၀ င်သော AAA ဓာတ်ခဲဘက်ထရီ ၂ လုံး
၁။ ဤဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူအစိတ်အပိုင်းများကို ၃.၀v ဘက်ထရီမှထုတ်ပေးနိုင်သည်
ဘက်ထရီ Holder အစိတ်အပိုင်းများ 4. ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ဘက်ထရီ Holder အစိတ်အပိုင်းများအသေးစိတ်:
ပစ္စည်း: ABS အစေး + နွေသံမဏိနီကယ် + ၂၆AWG1007 UL/CSA အတည်ပြုထားသောဝါယာကြိုး
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ဝါယာကြိုး၊ အဖုံးနှင့် WB 200-2P connector ပါ ၀ င်သော AAA ဓာတ်ခဲဘက်ထရီ ၂ လုံး
အရွယ်အစား: 52.5*25.7*15.3mm, ဝါယာကြိုးအရှည် = 150mm, connector = WB200-2P
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Battery Holder အစိတ်အပိုင်းအားလုံး
Battery Holder အစိတ်အပိုင်းများကိုထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်း
7. ဘက်ထရီ Holder အစိတ်အပိုင်းများ၏အမေးအဖြေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Battery Holder အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းလုပ်ငန်း ၁၀၀ အတွက်ထောက်ပံ့မှုနှင့်ဖောက်သည်များစွာသည် ၁၀ နှစ်ကျော်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရုံသာမကဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပြဿနာများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်နမူနာပုံစံများသင်ဘက်ထရီ Holder အစိတ်အပိုင်းများအတွက်နမူနာများကိုအခမဲ့ရနိုင်သည်၊ ကုန်တင်ခအတွက်သာပေးချေပါ။
hot Tags:: ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ စတော့၊ အစုလိုက်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ တရုတ်၊ တရုတ်၊ တရုတ်၊ Made၊ စျေးသက်သက်သာသာ၊ လျှော့စျေး၊ စျေးနည်း ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးရောင်းချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်